महासंघको साख र शिर उँचो बनाउन मेरो उमेदवारी
चन्द्र ढकाल–उमेदवार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ)
२०७६ फागुन २९ बिहीबार ११:०७:००
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं साधारणसभा चैत २८ र २९ गते काठमाडौंमा हुँदै छ ।
साधारणसभाले नयाँ कार्यसमिति पनि निर्वाचित गर्ने भएकाले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा महासंघका वर्तमान उपाध्यक्षद्वय चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधानले उमेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् ।
शेखर गोल्छापछि अब आउने वरिष्ठ उपाध्यक्षले महासंघको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।
यसै सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको समस्या समाधानमा महासंघको भूमिका, पछिल्लो समयमा महासंघ कमजोर भयो भन्ने उद्योगी व्यवसायीहरूकै गुनासो र उमेदवारको एजेन्डाका विषयमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ उपाध्यक्षको उमेदवारी घोषणा गरेको चन्द्रप्रसाद ढकालसँग बाह्रखरीका हिमाल पौडेलले गरेको कुराकानी :
महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उमेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । तपाईंको उमेदवारी केका लागि ?
म महासंघमा गएर गर्ने काम धेरै छन् । देशमा औद्योगिक तथा व्यापारिक वातावरण बनाउन थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । उद्योग व्यापार दर्ता, नवीकरण र खारेजी प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्नेछ ।
समय प्रक्रियाका कारण बढ्ने उत्पादन लागतलाई घटाउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै उद्योग, आयोजना, वेयरहाउसको निर्माणमा आवश्यक ईआईए, आईईका लागि लाग्ने लामो प्रक्रिया, समय र झन्झटलाई छोट्याउनुपर्नेछ ।
निर्यात व्यापार बढाउन आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्नेछ ।
सरकारी निकायबीच सहकार्यको अभावमा एउटा निकायबाट फर्स्योट भएको विषयलाई अर्को निकायबाट अहिले जुन अल्झाउने परिपाटी छ, त्यसलाई हटाउनुपर्नेछ ।
व्यवसायीहरूबाट सहज र वैज्ञानिक रूपमा कर उठाउने वातावरण बनाउनुपर्नेछ । दुविधा भएका कर कानुनहरूलाई समयानुसार परिमार्जन गर्नुपर्नेछ ।
महासंघको सचिवालय सुदृढीकरणदेखि साना, मझौला तथा ठूला उद्योगका धेरै विषयहरूमा हामीले अहिले अगाडि बढाएका काम बाँकी छन् ।
यी सबै एजेन्डाहरूमा पैरवी गर्न पनि म महासंघको नेतृत्वमा पुग्नुपर्नेछ ।
एउटा निकायबाट पार लागेको कर, सम्पत्तिको विषयलाई अनेक निकायबाट छानबिनको विषय बनाउने परिपाटीको समाधान गर्नुपर्नेछ ।
भीसीटीएस र अनिवार्य पानजस्ता विषयले साना तथा मझौला उद्यमी समस्यामा छन् । यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेछ ।
निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्ने, स्वदेशी उद्योग र व्यापारको संरक्षण गरी विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्नेछ ।
महासंघजस्ता संस्थालाई विज्ञ संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
विदेशी लगानी नेपालमा भित्र्याउनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने र नेपाली उद्योगी व्यापारी साथीहरूलाई विदेशी लगानीकर्ताको नेपालको साझेदार बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी नै छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले देशमा लगानीमैत्री, व्यवसाय र व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउने हो ।
व्यवसाय र व्यवसायीहरूको हितमा म एक व्यवसायी लाग्ने हो ।
त्यसका लागि देश घुमेको र साना ठूला सबै व्यवसायी साथीहरूको समस्या बुझेको तथा आफै पनि सामान्यबाट व्यवसाय थालेको म जस्तो व्यक्तिले यहाँसम्म आइपुग्दा देखेका, भोगेका संघर्षहरूलाई व्यवहारमा उतारेर आगामी दिनका लागि महासंघलाई सबैको साझा र शीतल चौतारी बनाउने हो ।
यी सबैका लागि मैले आफूले भूमिका खेल्ने ठाउँ देखेको छु र त्यसैका लागि मेरो उमेदवारी हो ।
दुवै पक्ष प्यानलसहित निर्वाचनमा जाने देखिन्छ । प्यानलसहित चुनावमा जाँदा त्यसले कस्तो म्यासेज दिन्छ ?
मैले प्यानलको घोषणा गरेको छैन । मेरो उमेदवारी घोषणा कार्यक्रममा पनि म एक्लैले घोषणा गरेको थिए ।
एक्लै घोषणा गर्दा सहमतिका लागि बाटो खुला रहोस् भनेर पनि मैले एक्लै घोषणा गरेको हुँ । सकेसम्म सहमति र समझदारीबाट पदाधिकारीहरू निर्वाचित हुनु राम्रो हो ।
तर आफ्नो प्यानल बनाउँदा भोलि महासंघमा काम गर्दा सहज हुन्छ भने प्यानल बनाएर खाँसै असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
महासंघ, व्यवसायी र व्यवसायीका हकहितमा काम गर्न प्यानल बनाउने हो भने त्यसले खासै केही नकारात्मक असर पर्ला जस्तो मलाईचाहिँ लाग्दैन ।
प्यानल आफैंमा नराम्रो होइन । यो पनि एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया नै हो ।
महासंघ जसरी एकताबद्ध भएर जानुपर्ने हो, प्यानलसहित चुनावमा जाँदा त राजनीति हुने र त्यसले महासंघलाई कमजोर बनाउँदैन ?
मैले अघि नै भनी सके कि सकेसम्म सहमतिको कुरा गर्ने हो तर यदि त्यो सम्भव भएन भने त चुनावमा जानुपर्यो ।
चुनाव पनि नेतृत्व छनोट गर्ने एउटा प्रजातान्त्रिक विधि नै हो ।
व्यवसायीकै हकहितमा काम गर्न, महासंघलाई थप सशक्त र सबल बनाउन प्यानल बनाउने कुरा गलत हुँदै होइन ।
प्यानल भनेको आफ्नो टिम हो । यो–यो व्यक्ति मेरो टिममा हुँदा मलाई निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न, सरकारसँग नेगोसिएसन गर्न, देशमा व्यावसायिक वातावरण बनाउन सहज हुन्छ भनेर टिम बनाउने हो भने किन नराम्रो मान्नु पर्यो ।
टिम नभई एक्लैले काम गर्न सक्ने पनि होइन । यसमा त्यति नेगेटिभ नै हुनु आवश्यक देख्दिन म त । तथापि सहमतिको प्रयास हुनु राम्रो छ ।
महासंघ निजी क्षेत्रको समस्या समाधानमा राज्यसँग बलियो ढंगले प्रस्तुत हुन नसकेको देखिन्छ, किन महासंघ कमजोर भयो ?
तपाईंले भने जस्तो महासंघ कमजोर बनेको छैन । निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको रूपमा यसले आफूले गर्नुपर्ने सबै कार्यहरू निरन्तर रूपमा सशक्त ढंगले गर्दै आएको छ ।
बरु समयअनुसार महासंघ थप मजबुत र सशक्त संगठनको रूपमा अगाडि बढेको छ ।
जुन उद्देश्यका लागि महासंघ स्थापना भएको हो, यो आफ्नो उद्देश्यमा निरन्तर लागि नै रहेको छ । देशमा व्यावसायिक वातावरण बनाउन र व्यवसायीका आवाज उठाउन महासंघको भूमिका निरन्तर उस्तै सक्रिय नै छ ।
महासंघले नेपालको निजी क्षेत्रलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउन खेलेको भूमिकालाई त्यसरी नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
हामीले संगठित रूपमै सरकारसँग विभिन्न तरिकाले लडेर, संघर्ष गरेर, वार्ता तथा छलफलका माध्यमबाट निजी क्षेत्रका धेरै एजेन्डाहरू स्थापित गरेका छौं ।
यो सबै महासंघकै योगदान हो । यसलाई यहाँसम्म ल्याउन महासंघका पूर्वअध्यक्षज्यूहरू तथा अग्रजहरूको निकै ठूलो त्याग र योगदान रहेको छ ।
यसलाई थप बलियो र सशक्त बनाउने जिम्मा हाम्रो हो । हामीले यसलाई निरन्तरता दिने छौ । महासंघको साख र शिर दुवै उँचो बनाउने छौं ।
अबको नेतृत्व शेखर गोल्छाले सम्हाल्दै हुनुहुन्छ । उहाँले त किशोर प्रधानलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्दै हिँड्नु भएको छ नि ?
हो, मलाई पनि मिडियामार्फत जानकारी भयो । तर उहाँले आगामी चैतको साधारणसभापछि महासंघको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ ।
त्यसैले उहाँ कुनै एक व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा लाग्नु हँुदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।
भोलि अधिवेशनबाट जो व्यक्ति पदाधिकारी वा कार्यसमितिमा आउँछन् तिनीहरू सबै नै उहाँका टिम हुन् । उहाँले साधारणसभाबाट निर्वाचित भएर आउने समितिलाई नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्ने हो ।
अर्को कुरा महासंघको विधान परिवर्तन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बनाउने जुन व्यवस्था भयो त्यो व्यवस्था अध्यक्षलाई निर्विवाद र न्युट्रल बनाएर उसको कार्यकाल सजिलो होस् भन्नका लागि गरिएको हो ।
यस्तै चुनावले अध्यक्षलाई विवादित बनाउने र अध्यक्षले काम गर्न असहज वातावरण बन्ने गरेकाले त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो ।
अहिले एक व्यक्तिको पक्षमा लाग्दा उहाँलाई काम गर्न असहज हुन्छ नि । त्यसैले उहाँले सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने बाटो खोज्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
तपाईं ठूलो व्यवसायी, तपाईंले महासंघलाई दिनुपर्ने समय दिनै सक्नुहुन्न भन्ने आरोप छ नि ?
यो त एकदम गलत आरोप भयो । म महासंघमा अहिले पनि छु ।
मैले कुनै बैठक तथा कार्यक्रममा समय नदिएको भन्ने मलाई लाग्दैन । तपाईंहरूलाई पनि थाहै होला म हरेक साताजस्तो विभिन्न जिल्ला, नगरले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पुग्ने गरेको छु । जिल्लाका साथीहरूले बोलाएका ठाउँमा म प्रायः पुग्ने गरेको छु । यो मेरो व्यावसायिक नेटवर्कका कारण पनि हो ।
हरेक जिल्ला, नगरसम्म मेरो आफ्नै व्यावसायिक नेटवर्क पनि फैलिएको छ ।
यो नेटवर्कका कारण म व्यवसायीहरूसँग टाढा रहन पनि सक्दिनँ ।
मेरो आफ्नो व्यावसायिक नेटवर्क नै यस्तो छ कि यिनै व्यवसायी साथीहरूसँग म चौबीसै घण्टा रहन्छु ।
अर्को कुरा मेरोे व्यवसाय सिस्टमले सञ्चालन हुने गर्छ । सिस्टममा चल्ने हुँदा महासंघमा आवश्यक समय दिन मलाई केही गाह्रो छैन र हुँदैन पनि ।
पूर्वअध्यक्षहरूले चुनाव गर्न हुँदैन, त्यसले महासंघलाई कमजोर बनाउँछ, अहिलेको अवस्थामा महासंघलाई प्रभावकारी बनाउन सहमतिबाटै जानुपर्छ भनेर प्रयास गरिरहनुभएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
म पनि सधैं सहमति कै पक्षमा छु । सकेसम्म सहमति गर्ने हो । मेरो विगतलाई हेर्ने हो भने म हरेक ठाउँमा सहमति मै काम गर्ने गरेको छु ।
अझ महासंघको मेरो यात्रालाई लिने हो भने त म उपाध्यक्षमा पनि सहमतिबाटै आएको हुँ ।
दुई–दुईपटक कार्यसमितिमा सर्वसम्मत वा लोकप्रिय मतका साथ आएको छु ।
यसले म सहमतिको पक्षमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । तर यसको मतलब चुनाव गलत हो, चुनाव नै हुनु हँुदैन भन्ने चाँही होइन ।
चुनावले कुनै पनि संस्था कमजोर हुँदैन । स्वच्छ र प्रजातान्त्रिक प्रतिष्पर्धाले महासंघलाई अझ बलियो बनाउँछ ।
तपाईं सहमतिको पक्षमा हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न ? पूर्वअध्यक्षहरूले गरेको निर्णयलाई तपाईंले पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ ?
मैले अघि नै भनिसकें म सधैं सहमतिकै पक्षपाति हो ।
पूर्वअध्यक्षहरूले सहमतिको निर्णय गर्दा उमेदवारको व्यक्तिगत स्थिति र मतदाताको चाहनालाई मध्यनजर गरेर गर्नुहुनेछ ।
यदि न्यायसंगत निर्णय हुन्छ भने म पनि त्यसलाई स्वीकार गर्छु ।
मलाई विश्वास छ, उहाँहरूले सहमतिको प्रयास गर्दा अहिले देखिएका उमेदवारको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक अवस्था र मतदाताको आकांक्षालाई मध्यनजर गरेरै त्यस्तो निर्णय गर्नुहुनेछ ।
यसको मतलब चुनाव नै भयो भने पनि तपाई आफूले जित्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?
हो, अहिलेको अवस्थामा म आफूले चुनाव जित्ने कुरामा शतप्रतिशत ढुक्क छु ।
मलाई जिल्ला नगर, एसोसिएट तथा वस्तुगत संघका साथीहरूले गरेको विश्वास, मेरो आफ्नै व्यावसायिक नेटवर्कले गर्दा म आफू चुनाव जित्ने त पक्कापक्की नै छ ।
त्यस्तो ढुक्क हुने बलियो आधारचाहिँ के हो ?
हाम्रो व्यावसायिक नेटवर्क ७७ जिल्ला, नगर तथा टोलसम्म पुगेको छ ।
रेमिट्यान्स, बैंक, इन्सुरेन्स, मोटर्सलगायत धेरै क्षेत्रमार्फत जिल्लाका व्यवसायी साथीहरूसँग हामी जोडिएका छाैं ।
मेरो यही व्यावसायिक नेटवर्ककै माध्यमबाट अहिले मेरो सबै जिल्ला तथा नगर, एसोसिएट तथा वस्तुगतका सबै क्षेत्रमा निकै राम्रो अवस्था छ । यसले मेरो जितलाई सुनिश्चत गरिसकेको छ ।
हेर्नुस्, म उपाध्यक्ष भएदेखि नै महासंघकै काम र कार्यक्रमहरूमा नेपालभर निरन्तर पुगेको छु । प्रदेश, जिल्ला–नगर तथा वस्तुगत संघका साथीहरूले मलाई नै विशेष आग्रह गरेर बोलाउने गर्नुभएको छ ।
अधिवेशन, साधारणसभा हुन् या ठाउँ–ठाउँमा भए गरेका महोत्सव या अन्य कार्यक्रमहरू, उहाँहरूले बोलाउनुभएको ठाउँमा मिलेसम्म र भ्याएसम्म म पुगेको छु ।
उहाँहरूले आफ्ना समस्या, गुनासा र अप्ठेराहरू राख्नुभएको छ ।
उहाँहरूका सुख, दुःखका धेरै कुरा मैले सुनेको छु र सक्नेसम्म समाधानमा लागि परेको पनि छु । जुन कुरा साथीहरूले मनन् पनि गर्नुभएको छ ।
मलाई नेतृत्वमा ल्याउन उहाँहरूको ठूलो सदासयता र आग्रह छ ।
त्यसैले देशभरका आदरणीय व्यवसायी साथीहरूको आग्रह र सदासयताका कारण पछि हट्न मिल्ने र सक्ने अवस्था नै छैन । त्यसैले वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनेमा म ढुक्क छु ।